Kugadzirisa Dambudziko Rekutaurirana | Nhanho nhanho Infographic kubva Martech Zone
Wati wambosangana nedambudziko rine chekuita nekambani yako here? Zvakanaka, hausi wega. Dambudziko rekutaurirana rinogona kukurira - kubva kunonoka kupindura nezve izvo zvaunofanirwa kutaura kune ese masocial kutaurwa anouya kuzotarisa kuti kana iri chaiyo dambudziko. Asi pakati penyonganiso, zvinogara zvakakosha kuve nehurongwa.
Takashanda pamwe chete nesu nzanga yekutarisa chikuva vanotsigira kuMeltwater kukudziridza iyi inotyisa infographic pane iyo Matanho gumi Ekutarisira Dambudziko Rekutaurirana. Unyanzvi hwavo pamwe nesoftware yavakavaka zvakapa timu ruzivo rwakanyanya rwekuti ungagadzirise sei dambudziko remagariro kana rePR. Chikurukuru, usati waita chero chinhu, unofanirwa kufema, kuburitsa mweya, uye kudzokorora. Dzikama uye tarisa pamatanho anotevera.
Inhale, Exhale, Dzokorora - Usapindure nekukurumidza kana pamoyo. Makambani anowanzozvicherera gomba rakadzika kana asingaronge mhinduro yavo.
Denderedzwa nengoro uye kurira alarm - Unganidza timu, uvapfupikise pane zvakaitika, uye mirira kuti upindure kusvikira wave nehurongwa hwakajeka hwekuita.
Ongorora zvakaitika - Chii chaitika? Veruzhinji vanofunga kuti chii chakaitika? Veruzhinji vakaita sei? Ndeapi matanho anoda kutariswa?
Nzwisisa bhizinesi kuita - Sarudzo dzako dzinokanganisa sei bhizinesi, mari, uye mukurumbira?
Teerera - Shandisa PR uye zvemagariro midhiya ekuongorora maturusi kuti utarise mafambiro ezve nhepfenyuro nenharaunda yako.
Sarudza pane Chikamu Chemubatanidzwa neMeseji - Iye zvino zvaunoziva zvakaitika uye bhizinesi kukanganisa, iwe unenge uine yakajeka pfungwa yenzvimbo yekutora.
Ita Zvisarudzo paNzira dzeKugovera - Zvichienderana nekumisikidza nekutumira mameseji, sarudza nzira dzakanakisa dzekuendesa, izvo timu yako yaanofanira kupindura, uye nemabatiro avanofanira kuita.
Tora SHOKO KUTI - Bvisa meseji yako.
Monitor Reaction uye React seinodiwa - Hausati wapedza. Iyezvino iwe unofanirwa kuongorora maitiro uye matanho api anofanirwa kutorwa anotevera zvichienderana nekuita kwevezvenhau uye neruzhinji manzwiro.
Dzidza kubva kuNzira - Iwe unozodzidza chimwe chinhu chitsva, zvisinei nekuti zvinhu zvinofamba sei.
Kunyangwe makambani arikusimbisa ari kuisa pamatanho ekupindura zvechimbichimbi, makambani mazhinji anoita kunge haakwanise kutevedzera misimboti yekutaurirana kwedambudziko: kuenda pamberi penyaya, kutora danho rekukurumidza, kupa kwakawanda uye nekuvimbika kuvandudza, uye kwete kupomera mhosva kune mamwe mapato.
Maryville University, Matambudziko Ekutaurirana eCrisis kune Vashandi vePR
Tarisa uone infographic pazasi yeakakura mutambo chirongwa che kutaurirana kwedambudziko, uye unzwe wakasununguka kugovana zviitiko zvako pazasi!
Tags: dambudzikokutaurirana kwedambudzikomatanho ekutaurirana enjodziinfographicmeltwaterprhukama hwevanhudambudziko rehukama neruzhinjimatanho
Gumiguru 12, 2016 pa 9:57 AM
Matipi makuru! Inobatsira kwazvo!
Ini ndinotenda kuti hwaro hwekugadzirisa matambudziko kushandisa chishandiso chakanaka chekuteerera munharaunda (kureva Brand24) Nekuda kweizvi iwe unozotanga kuziva kana mumwe munhu akataura nezvako uye uchikwanisa kuita nenzira kwayo. Icho chinofanirwa mazuva ano.
Apr 3, 2017 pa 10: 31 PM
Brand24 chishandiso chikuru chekuteerera - matani esarudzo!